Azụmahịa na-egosi - Banyere anyị - Ningbo MH
Ebe ọ bụ site na nhazi ahụ, anyị na-ekere òkè dị iche iche nke ndị ahịa na ụlọ na mba ọzọ. N'afọ a, anyị na-agarịrị Preview na Seoul, Intertex Milano-Ready to Show, France TexWorld Fair na Canton Fair na ihe ndị ọzọ.
aha Address Ụbọchị Ụlọ Ntu.
Ihe ngosi 122nd Canton Ee e. 380 Yuejiang Middle Road, China Ụlọ Mpụ ngosi na mbubata ngwaahịa
31ST Ọkt. ---- 4th Odi., 2017
Ahịa na-egosi Home Categories --Na-atụgharị --Zippers --Ribbon & Tape --Ụzọ --Laces --Buttons --Interlining --Tassel & Fringe / Trimming --Tailoring Ngwa --Garments & Ngwa --Nweghari Machine & Akụkụ --Fabric --Onye ozo gbasara Anyị --MH Isi --MH Industrial --MH History --Trade Na-egosi - Ndị ọrụ anyị - Oghere Image - Album vidio Kpọtụrụ Anyị --Odi ebe --Feedback Community --Blog --App --Sonyere anyị